कुश्माबजारको सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्रमा सिसी क्यामेरा जडान - नेपालबहस
कुश्माबजारको सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्रमा सिसी क्यामेरा जडान
| ८:४२:५५ मा प्रकाशित
२८ असोज, पर्वत । नजिकिँदै गरेका चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै पर्वत जिल्लाको सदरमुकाम कुश्माबजारको सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्रमा सिसी क्यामेरा जडान गरिएको छ । विगत चार वर्षअघिदेखि बिग्रेका क्यामेरा मर्मत गरी सिसीटिभी मंगलबारदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको हो । कुश्मा नगरपालिकाको सहयोगमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले क्यामेरा मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याएका हुन् ।
कुश्मामा २० वटा संवेदनशील ठाउँमा क्यामेरा जडान गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक विश्वराज अधिकारीले बताए । “सुरक्षा संवेदनशीलता भएका ठाउँमा क्यामेरा जडान गरिएको छ”, उनले भने, “चोरी, झैझगडा र अन्य अपराध रोक्नका लागि यसले सहयोग पु¥याउने छ ।”
कुश्मा मुख्यचोक, बजार क्षेत्र, लामा र अग्ला पुल, बञ्जीजम्पलगायत ठाउँमा क्यामेरा जडान गरिएको छ । लोकतान्त्रिक चोक, प्रगतिचोक, मैत्रीचोक, आचार्यचोक, दुर्लुङचोक, शिवालयचोक, बन्जीचोक, अस्पताल चोकलगायत स्थानमा सिसी क्यामेरा जडान गरिएको छ । यसअघि विसं २०७२ मा राखिएकामध्ये पाँचवटा क्यामेरा मर्मत गरी पुनः सञ्चालन गरिएको छ भने १५ क्यामेरा कुश्मा नगरपालिकाको सहयोगमा राखिएको छ । पहिलो चरणमा २० वटा राखिए पनि बजार क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर व्यावसायिक प्रतिष्ठानको सहकार्यमा थप क्यामेरा जडान गर्ने लक्ष्य राखिएको प्रनाउ अधिकारीले बताए ।
कुश्मा नगरपालिकाका नगरप्रमुख रामचन्द्र जोशीले सिसीटिभीको शुभारम्भ गर्दै बजारमा सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर प्रहरीसँगको सहकार्यमा सिसीटिभी क्यामेरा मर्मत गरी पुनः सञ्चालन गरिएको बताए । क्यामेरा पुनःसञ्चालनका लागि नगरपालिकाले रु पाँच लाख सहयोग गरेको छ । “आपराधिक क्रियाकलाप रोक्नका लागि यो प्रविधि सबैभन्दा उपयोगी छ”, उनले भने, “जनशक्तिसमेत कम लाग्ने भएकाले अपराध नियन्त्रण गर्न प्रहरीलाई पनि ठूलो सहयोग पुग्छ ।”
कुश्माबजारमा धिरज कम्प्युटर नेटवर्कले सञ्चालन गरेको नेटको नेटवर्कलाई प्रयोग गरी क्यामेरा जडान गरिएका कारण तारका लागि छुट्टै खर्च गर्नुपरेको छैन । यसअघि विसं २०७२ मा धवलागिरि अञ्चलको प्रवेशद्वारको रूपमा रहेको पर्वतको डिमुवाबाट पर्वतको सदरमुकाम कुश्माबजार र वारीबेनीमा समेत क्यामेरा जडान गरिएको थियो ।
सबै क्षेत्रमा गरी ३५ वटा क्यामेरा जडान गरिएको थियो । सिसीक्यामेरा जडान गर्नका लागि पर्वत उद्योग वाणिज्य सङ्घको संस्थागत पहल तथा जिल्ला विकास समिति र कुश्मा नगरपालिकाले समेत सहयोग पु¥याएका थिए । त्यसका लागि रु २२ लाखभन्दा बढी खर्च गरेको तर मर्मतको अभावमा एक वर्षपछि नै सबै क्यामेरा बिग्रिएका थिए ।
फरार पाँच प्रतिवादी पक्राउ, कारवाहीका लागि अदालतमा पेश ७ घण्टा पहिले
सुनसरीबाट हतियारसहित एक जनालाई पक्राउ ७ घण्टा पहिले
यस वर्ष १२ देखि १५ लाख मालाको माग, तर फुल महँगो ! १२ मिनेट पहिले
नरेश र समिक्षाकाे चौतारीमा सोल्टि ज्यु ! पिपलू बर ३८ मिनेट पहिले
सेनेगलको समुद्री इलाकामा डुंगा डुब्दा १४० को मृत्यु ४६ मिनेट पहिले
पछिल्लो २४ घन्टामा थप १६ जनाको मृत्यु ४७ मिनेट पहिले
धापासीमा छुरा प्रहारबाट युवकको हत्या, दुई जना पक्राउ ५५ मिनेट पहिले
फेवातालको बाँध ४ घण्टा पहिले
अब पनि सग्लो नेकपा रहला र ? ५ घण्टा पहिले
पाँच शैय्याको अस्थायी कोभिड अस्पताल १९ घण्टा पहिले
भक्तपुरमा प्लाज्मा दानका लागि रक्तदान गर्दै १९ घण्टा पहिले
प्रदेश नं. २ मा ११७ नयाँ संक्रमित थपिए ७ दिन पहिले
पर्वलाई कोरोना फैलने माध्यम बन्न नदिऔँ : उपराष्ट्रपति पुन ४ दिन पहिले
“असम्भब भन्नेकुरा मुर्खको डायरीमा मात्र हुन्छ” ! ५ दिन पहिले
नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रबाट लागु औषध र सुनसहित चार पक्राउ ५ दिन पहिले
जगत नै हँसायौ मलाई रुवायौ १० घण्टा पहिले
आज उपत्यकामा १६१५ जना संक्रमित थपिए १ दिन पहिले
सहकारी मार्फत जुनारको जुस उत्पादनको तयारी २ हप्ता पहिले
प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सको तेस्रो वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न २ हप्ता पहिले
आजबाट नेपाल-चीनबीचको तातोपानी नाका पुनः खुल्ने २ दिन पहिले
काेराेना कहरमै शुरु भयो, पर्यटकीय क्षेत्रमा चहलपहल २ हप्ता पहिले
कांग्रेसले १४औँ महाधिवेशन कार्यतालिकामाथि छलफल गर्दै ४ महिना पहिले
सभामुखमा अग्नि सापकोटा निर्विरोध चयन ९ महिना पहिले
ताइवानमा ५.९ म्याग्नीच्यूडको भूकम्प १ वर्ष पहिले
कोरोना भाइरसका कारण नेपाली उडान रद्द भए ९ महिना पहिले